Sheekadii Javier Mascherano iyo Juventus oo dhinac u dhacday – Gool FM
Sheekadii Javier Mascherano iyo Juventus oo dhinac u dhacday
(Barcelona) 23 Juunyo 2016 – Kooxda kubadda cagta Juventus ayaa guuldarro kala kulantay doonistii saxiixa xiddiga Barcelona ee Javier Mascherano.
32-sano jirkaan ayaa si wayn loola xiriirinayey inuu u dhaqaaqi doono kooxda xafidanaysa horyaalka Serie A, kuwaasoo ay tahay inay weli garoonka Camp Nou ka soo kaxeystaan Dani Alves.
Mascherano ayay labo sano uga harsan tahay qandaraaskiisa, waxaana uu haatan qarka u saaran yahay inuu la sii joogo kooxda tababare Luis Enrique, Juve ayayna tahay inay u dhaqaaqdo bartilmaameedyo kale.
“Barcelona ma iibinayso Mascherano, tani waa arrin soo xirantay iminka.” sidaas ayuu Agaasimaha Juve ee Giuseppe Marotta u sheegay jariiradda Marca.
“Miralem Pjanic iyo Dani Alves waxaan bilownay inaan kooxda u dhisno xilli ciyaareedka soo socda.”
Xiddiga xulka qaranka Argentina ayaa daaha ka rogay horraantii bishaan in Barca ay ka caga jiidayso inay fasaxdo isaga, wuxuuna carabka ku adkeeyey inuusan ku qasbi doonin iyaga inuu ka tago kooxdii uu matalayey tan iyo sanadkii 2010-kii.
Mascherano ayaa ku guuleystay afar horyaalka La Liga lixdii xilli ciyaareed oo uu joogay Spain, sidoo kalena waxa uu qaaday labo Champions League.
TOOS u daawo: Colombia vs Chile - LIVE (Nus-dhamaadka Copa America)